Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Ethiopia
Qubanaha Wararka Ethiopia
Posted by ONA Admin	/ April 4, 2013
Waxaa jagadii baarlamaanka Ethiopia iska casishay haweenaydii uu Kaligii Taliye Meles Zinawi ka bakhtiyay, taasoo isu diyaarinaysa inay isu sharaxdo duqa (Mayor) magaalada Addis Ababa doorashada laguwado inay bishan dhacdo, si,ay u tidhaahdo doorashada soosocota hoos baan kasoo bilaabay. Doorashadan waxaa qaadacay kana biyodiiday 30-xisbi oo intabadan ay TPLF-ta is ogyihiin oo sheegay inaysan doorashadani cadaalad udhacaynin isla markaana uu ururka EPRDF ku shuban doono. Wuxu ururka EPRDF kacabsi qabaa madaaama ay ururadaasu qaadaceen inay dadka codayndoona ay aad u yaraadaan( low turn out). Haddaba si,ay taas ooga hortagaan waxay sameeyeen laba qorshe.
1. In ardayda Iskuulada 100 Birr lasiiyo si,ay isuqoraan ooy kaarka codbixinta u qataan.
2. In xubnaha Kaadirka ee EPRDF katirsan laga keeno gobollada oo todobaadkan tababar looga furay magalaada Addis Ababa si,ayna codbixintu
hadhaw oogu adkaanin.
Hadaba maxaa ku kalifay inuu ururka EPRDF sidaas sameeyo waxay doonayaan oo kaliya in rayi’yul caamka ay khaldaan si,aan caawimaada iyo kaalmada ay kahelaan dalalka deeqda bixiya loogajarin ama aan loo dhaleecayn.
Qiimayn (Gimmgama ) kadhex socota ciidamada Ethiopia.
Waxaa baryahan kadhex socda ciidamada Ethiopia Qiimayn (Gimmgama) lagu qaadayo saraakiisha Muslimiinta ah ama magac Muslim wata kuwaasoo lagusoo eedeeyay inay taageersanyihiin kacdoonka muslimiinta Ethiopia (codkanaga hanala maqlo) oo hadda socday mudo hal sano kabadan. Waxaa dhinaca kale soo badanaya in guryaha muslimiinta ay ciidamadu u daataan ooy kaqaatan kambiyuutarada (Lab Top PCs), Dahabka, Taleefanada gacanta (Mobile Phones) & wixii lacag ah eey gacanta kudhigaan ciidanku.
Baryahan danbana waxaa sii badanaya tageerayaasha kacdoonka muslimiinta Ethiopia(codkanaga ha nala maqlo). Markuu kacdoonkani bilaabmay ayaa wuxuu ururka TPLF kubadalay majliskii arimaha Islaamka ee looyaqaano Al-Majlisul Aclaa kuwo katirsan ururka EPRDF, Gaarhaan madaxa majliska oo katirsan ururka Axmaarda ee ANDM.
Waxaa baryahan kajira wadanka Ethiopia in laga la’yahay lacagta adag (Hard Currency), taasoo keentay inay qiimaha maciishada daruuriga ah ay cirka iskushareerto, islamarkaana raashinka sida rootiga oo loogalo safaf aad u dhaadheer. Biyaha ayaa had iyo jeer aan lahelin oo gabaabsi ama go’an halkii jeerigaan ee biyaha caadiga ah ayaa wuxuu marayaa mararka qaar 15 Birr. 100 Dollar ee Maraykanka ayaa waxaa sarifkeedu marayaa 2,300 Birr. Kiintaalka daafida ah ayaa waxaa la sheegayaa inuu isna marayo 1800 Birr. Lacagyowga adag (Hard Currency) ee caalamku oogu deeqana waxay kudanbaysaa jeebabka shakhsiyaad ururka TPLF katirsan ama talada wadanka iska maamusha.
Sababaha oogu badan ee keentay in wadanka laga waayo lacagaha ajinabiga ee dibada wax lagaga soo iibsado ayaa loo aanaynayaa inay kamid yihiin kuwan soosocda:-
1- Aaskii KT Meles ooy kubaxday lacag kabadan 1-Milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
2- Xuskii maalinta Qawmiyadaha Ethiopia ooy kubaxday 2-Milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
3- Dabaaldagii loosameeyay Ciidamada Ethiopia ooy kubaxday 1.2 Milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
4- Shirkii EPRDF-ta ee dhawaan laguqabtay Bahir Dar ooy ku baxay 3-Milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
5- Waxaa qorshaha kujira oo iyadana loo dabaaldagayaa xuskii kasoo wareegay bilowgii biyo xidheenka oo iyana ay kubixi doonto 0.6- Milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
Waxaa jagadii madaxwaynenimada lagaqaadi doona bisha soosocota Madaxwayne ku sheega gobolka Gambella Obengo Omit oo lagusoo eedeeyay inuu kadanbeeyay xasuuqii loogaystay 2005-tii Qawmiyada ANYUKA oo kudhaqan gobolka gambella, halkaas oo isku maalin lagudilay dad kabadan 500 oo qof, wakhtigaas oo uu ahaa madaxa amniga gobolkaas Gambella. Mr. Omit ayaa waxaa loo magacabay kuxigeenka jeelasha magaalda Addis Ababa. Dadka arrimaha Ethiopia udhuun duleela ayaa waxay leeyihiin waxaa talaabadan keentay si loo hirgaliyo go’amadii kasoobaxay kalfadhigii ururka EPRDF ee dhawaanta kadhacay magaalada Bahir Dar.
Go’aamadaas ayaa waxaa kamid ahaa inay 21-sano kadib ay qirtaan inay jiraan maamul xumo aad ubaahsan iyo musuqmaasuqa oo heer aan laxakamayn karin gaadhay, markaas waxay ballanqaadeen inay wax kaqaban doonaan sida Gobollada Gambella & Ogadenia. Maxay maamul xumo wax kaqabtaan ama musuqmaasuq toona iyaga laftigooda ayaa kasamaysan ooy ku idishahay intii reer xumaysa oo idil. Haday Madaxwayne kusheega gobolka Gambella Obengo Omit ay halkaas katureen bal aynu eegno Ina Ilayna ( Cabdi Ubo) meeshay geeyn doonaan iyo siday oola dhaqmi doonaan markay dantooda kadhamaystaan.
Dhanka kale wadamada reer galbeedka oo Itoobiya udifaaci jiray indho la,aan iyo dhago la,aan ayaa hada wax badan iska badashay aragtidii caynkaas ahayd waxaana sabab looga dhigi karaa arimahan soosocda:-
1- Dagaalkii qaboobaa (Cold War) ee aduunka oo dhamaaday.
2- Dadka Ethiopia udhashay ooy uhaysteen inay dhamaantood yihiin dad haysta diinta Kirishtanka laakiin hada ay ogaadeen in lagaba tiro badanyahay.
3- Aduunkii oo danaysi (Interest) isubadalay ama dhaqaale ha noqdo ama istiriraatiijiyad (Strategy) ha noqontee.
4- Dadka wadanka hogaamiya ooy awal hore uhaysteen inay yihiin dad kaliya ee la aamini karo laakiin hada ay diyaar u yihiin in u wadanka kataliyo cid aan danahooda kahor imanaynin.
Waxaa kale oo baryahan dambe siibadanaya booqashaday booqanayaan wadanka Ethiopia madaxda aduunka iyo ururo caalami ah silooga hortago inuu burbur siyaasadeed kadhaco haday wadamada reer galbeedku wax ku badbaadin karaan maamul la,isku kala badbadallo waxay badbaadlin lahayeen xukuumadii Xusni Mubaarak ee dalka Masar katalin jiray 32-sano.
Madaxda caalamka ee dhawaanta booqashada kutagtay Itoobiya waxaa kamid ah:-
1- Banki Moon Xoghaya guud ee UN-ta.
2- Ra’isul wasaare ku xigeenka wadanka boqortooyada Ingiriiska (UK).
3- Madaxwaynaha wadanka Germany.
4- Madaxwaynaha wadanka South Africa.
5- Wafti kasocda Midowga Yurub (EU).
6- Wasiirka Arrimaha Dibada ee wadanka Iskutaga Imaaraad Carabta (UAE).
7- Wasiirka Arrimaha Dibada ee wadanka Neatherlands (Holland).